ကျွန်တော်ချစ်သောသူငယ်ချင်းများ: 2007-05 for all my lovely friends
3D Desktop! TouchScreen and XGL on Linux (part 1)
အင်တာနက်ကနေ ဖိုင်တွေ Share လုပ်ကြဖို့အတွက်
နောက်ထပ်တွေ့တာလေးတွေပါခင်ဗျာ အားလုံး Free ပေးထားပါတယ် . .
Register လုပ်ပြီးသုံးရင်ပိုကောင်းတဲ့ဆိုက်တွေလည်းရှိပါတယ် . .
လူကြိုက်အများဆုံး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြထားပေးပါတယ် . .
တစ်ကြိမ်မှာ အများဆုံး upload လုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏလေးတွေကိုဘေးမှာရေးပေးထားပါတယ် . .
ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးချ နိုင်ကြပါစေဗျာ . .
Unregister user upload size (MB) - Register user upload size (MB) - -Space allow
http://www.filenanny.com/ 10 - unlimited - 500
http://www.quicksharing.com/ 500 - 500 - unlimited
http://dl4.ohshare.com/ 80 - 80 - unlimited
http://www.bestsharing.com/ 125 - 125 - unlimited
http://www.freefileupload.net/ 50 - 50 - unlimited
http://www.netfilego.com/ 100 - 100 - ?
http://www.filewind.com/ 500 - 500 - unlimited
http://fileave.com/ 50- good for multimedia
http://www.mediafire.com/ 100 - 100 - 5GB
http://www.filecrunch.com/ 250 -good for multimedia
http://www.upload2.net/ No limits on file number, file size, filenames and extensions -host 1 year, can use DLMs
http://www.freefilehosting.org/ 50- unlimited BW
http://www.hotlinkfiles.com/5- 50 - good for multimedia hot links
http://www.gigafiles.co.uk/ 20 - 20 - 5GB
ဒါတွေထဲမှာ 80 MB အောက်ဆိုရင်တော့ http://dl4.ohshare.com/ ကတော်တော်လေး အဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ် ၊
ရက် 30 အတွင်း ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ရင်တော့ ဖျက်ပါတယ်
နောက်ထပ်လည်းအများကြီး (18 Sites) ကျန်သေးတယ်ဗျာ . . . ဒီကနေသွားလို့ရပါတယ် . .
ရှင်းလင်းချက်မူရင်းတွေကို သေသေချာချာဖတ်ချင်ရင်ဖတ်လို့ရအောင်ပါ တခြားကောင်းတာလေးတွေရှိရင်လည်း ပြောကြပါဗျို့ . .`
နောက်ထပ် site အသစ်တစ်ခုကတော့ http://www.massmirror.com/ တဲ့ခင်ဗျ...
အဲဒီနေရာကနေ 1 GB အထိ တစ်ခါတည်း upload လို့ရပါတယ်..
ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Your Secret Delete Link: ဆိုတာရယ် - Share link တစ်ခုရယ်
အဲဒီနေရာတွေက Download link7ခုရယ် ပြန်ပေးတာတွေ့ရတယ် -
ပျော်ပျော်ကြီး Share လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်... အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ....
အညွှန်း - အင်တာနက် Internet
အပန်းဖြေအနားယူလို့ရအောင် VCD လေးတွေပါ...နားထောင်ကြည့်ကြပါဦး
အညွှန်း - အပန်းဖြေအနားယူရအောင် Relaxation Zone
ဒီနေ့ ၀င်နေကြအတိုင်း Mysteryzillion ကိုဝင်သွားတော့ Admin ကိုစေတန်ရဲ့ ကြေညာချက်ကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်...
အဓိကပြဿနာက ဖိုရမ်တွေထဲကို ၀င်ပြီး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေတင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ရုတ်ရက်ကြည့်ရင်တော့ ပုံတင်တာလောက်ပဲလို့ ထင်ရပေမယ့် ယောင်ပြီးအဲဒီပုံတွေကို click သွားလုပ်မိတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ web browser ကိုသူတို့ ရဲ့ အခြားနေရာတစ်ခုကို လမ်းကြောင်းလွှဲ ( redirect ) ပြီးခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ web site ကိုရောက်သွားမိပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့် ကွန်ပျုတာရဲ့ အင်တာနက်လိပ်စာ (IP address) ကစပြီးတော့ အထဲမှာသုံးထားတဲ့ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကို နှိုက်ထုတ် ခိုးယူနိုင်တဲ့ script တွေကိုပြန်ထဲ့ပေးလိုက်နိုင်တာကြောင့် အရမ်းအန္တရာယ်များပါတယ်... အကောင်းဆုံးကတော့ အဲဒီဟာမျိုးတွေတွေ့ရင် ချက်ချင်း သက်ဆိုင်ရာ အက်ဒမင်တွေ ၊ တာဝန်ရှိသူတွေကို အကြောင်းကြားတာပါပဲ....
ကိုစေတန်ရဲ့ သတိပေးချက်ကို အောက်မှာ ကူးပြီးဖော်ပြထားပါတယ်...
Alert!!! Read It
အခု ကျွန်တော်တို့ MZ Forum မှာ
Sex အပိုင်းနဲ့ တင်တာတွေ တွေ့ရပါတယ်..
အဲလို တင်ထားတဲ့ post တွေကို မဖတ်ပါနဲ့...
Admin ဆီသို့ သတင်းပို့ပါ..
သူတို့ အထဲတွင်ပါဝင် တဲ့ link များကို လုံးဝ မနှိပ်မိပါစေနဲက..
အဲဒီ link များ ဟာ trojan များ ထည့်သွင်းထားပါတယ်..
မိမိစက်သို့ အမြဲထောက်လှမ်းပြီး data မျာိးကု ကူးယူသွားပါမယ်..
နောက်ပြီး မိမိသွားသမျှ forum များကိုလည်း လိုက်ပြီး ထိုကဲ့သို့ post များတင်ပါလိမ့်မယ်..
ထိုpost များ ဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆို...
glite forum ကနေ တဆင့် သတိူ့ တွေ နောက်ယောင်ခံလိုက်လာတာပါ...
universe ရေ.. မင်းကို အပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်..
မင်းစက်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ trojan ၀င်နေပြီကွ..
user name တစ်ခုနဲ့ ဒီကောင်တွေထဲက တစ်ကောင် ၀င်ပါတယ်...
ပြီးတော့ post တင်ပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ MZ Forum အဖွဲ့သားတွေက တွေ့တာနဲ့ ဖျက်လိုက်နိုင်ပါတယ်..
နောက်ပြီး username ကို delete လုပ်လိုက်ပါတယ်..
ဒီတစ်ခါတော့ post ကို ဖျက်ပြီး user name ကို ban လိုက်ပါတယ်...
ပြီးတော့ သူတို့ ဆီ email ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်..
ဒါပေမယ့် email ဟာ... အတုအယောင်ဖြစ်နေပါတယ်..
နောက်တစ်ကြိမ် ban ခံထိတဲ့ ကောင်ထပ်ဝင်လာပါတယ်..
မကြာခင်မှ ထွက်ပြီး နောက်ထပ် user name နဲ့ဝင်လာပါတယ်...
အလားတူ post များကို တင်ခဲ့ပါတယ်..
ချက်ချင်း ဖျက်ပြီး ban လိုက်ပါတယ်..
သူတို့ IP နဲ့ trace လိုက်ကြည့်လိုက်ရတော့...
တစ်ယောက်က chicago , Batavia , USA ကနေ အသုံးပြုတာပါ...
အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ နောက်ထပ် user name နဲ့ post တင်ပါတယ်...
အဲဒီ user naem က တော့ Gegorgia, Tampa City , USA က ဖြစ်ပါတယ်..
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ မြို့ပြောင်းဖို့က မလွယ်လောက်ပါဘူး..
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဖျက်လိုက် ဘန်းလိုက်နဲ့ ချီတက်ရဖို့ ရှိပါတယ်..
ဒါမှ မဟုတ် site address ပြောင်းဖို့သာရှိပါတယ်..
site address ပြောင်းရင် user များ အခက်အခဲဖြစ်မည်ဆိုးသောကြောင့် မပြောင်းလဲသာပါ...
ထို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့သော forum နှင့် မသက်ဆိုင်သော post များကို လုံးဝ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့ခြင်း မလုပ်ပဲ..
admin , moderator များကိုသာ အမြန်ဆုံးတိုင်ကြားပေးပါရန် ကြေငြာအပ်ပါသည်...
အညွှန်း - ကိုယ်ကျင့်တရား Morality, အင်တာနက်တစ္ဆေများ Internet devils
ဒီနေ့တော့ port နံပါတ် ၀ ကနေ ၈၀ အထိ အကြောင်းကို ဖော်ပြသွားမှာပါ..
ဒီ port တွေကို Common ports တွေလို့လဲ ခေါ်ပါသေးတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာမြင်ရမှာပါ...
Reserved; do not use (but isapermissible source port value if the sending process does not expect messages in response)
TCPMUX (TCP port service multiplexer)
RJE (Remote Job Entry)
QOTD (Quote of the Day) protocol
CHARGEN (Character Generator) protocol
FTP - data port
FTP - control (command) port
SSH (Secure Shell) - used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwarding
Telnet protocol - unencrypted text communications
SMTP - used for e-mail routing between mailservers E-mails
RSFTP - A simple FTP-like protocol
QMS Magicolor2printer
BOOTP (BootStrap Protocol) server; also used by DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
BOOTP client; also used by DHCP
HTTP (HyperText Transfer Protocol) - used for transferring web pages
အညွှန်း - Computer များရဲ့ဂယ်ပေါက်များ
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ကျနော် အီလက်ထရောနစ်နဲ့ ကျောင်းပြီးခဲ့တာပါ..
မရှက်တန်း ၀န်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှသိပ်မသိ၊ မတတ်ခဲ့ပါဘူး.. အဲဒီအချိန်က Computer ကိုဘဲ အသည်းအသန်လုပ်နေခဲ့ပြီး.. မေဂျာဘာသာမှာတော့ စာမေးပွဲအောင်ရုံလောက်ပဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်..
ကျောင်းတုံးကမကြေညက်ခဲ့သော မေဂျာဘာသာတွေကို ပြန်လေ့လာမယ်လို့ စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာတော့ တော်တော်များများကို မေ့သွားပါပြီ၊ အဲဒါနဲ့ပဲ ထုံးစံအတိုင်း အင်တာနက်ထဲမွှေမိပါတယ်။
ဘာသွားတွေ့လည်းဆိုတော့ မက်ဆာချုးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ OpenCourseWare site ဖြစ်တဲ့ http://ocw.mit.edu/index.html ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာက သူတို့ဆီမှာသင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွေကို free လေ့လာသင်ယူခွင့် သင်ခန်းစာတွေကို Download ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ( ဒီဆိုက်အကြောင်းကို သီးခြားရေးပါဦးမယ်.)
အခုတော့ကျနော်ကျောင်းပြန်တက်ပါတော့မယ်၊ အင်တာနက်ကျောင်းထဲက MIT-OCWစာသင်ခန်းထဲမှာပါ .. ပြန်လေ့လာတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကီုဖိုရမ်မှာရော၊ ဘလော့မှာပါတင်သွားမယ် လို့စဉ်းစားထားပါတယ်..
အညွှန်း - ကျွန်တော်နှင့် အီလက်ထရောနစ်
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်လည်း ရှေးကနောင်တော် အစ်မတော်တွေရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း
၀င်းအင်းဝ ကနေပြီး ဇော်ဂျီစာလုံးကို အပြောင်းအလဲ လုပ်လိုက်ပါတယ် . .
ဒီမှာ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ရလာဒ်ကတော့ အမြင်မှာ တခြားသူတွေနဲ့ ဆင်တူ တသားတည်းဖြစ်သွားခြင်းပါဘဲ . .
ပြီးတော့ Blogger ရဲ့ Built in Text Editor ကိုသုံးပြီး တစ်ခါတည်း စာရိုက်လို့ရလာတယ် .
အခုလို အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မြန်မာစာတွေ တွဲရိုက်ရတာ အရမ်းအဆင်ပြေလာပါတယ်
အရင်ကဆို HTML နဲ့တွဲနေရတာ တော်တော်လေးခေါင်းစားပါတယ် ...
Hyperlink တစ်ခုထည့်ရတော့မယ် ၊ ဒါမှမဟုတ်...တစ်နေရာရာမှာ တစ်ခုခုပြင်ရတော့မယ်ဆိုရင် . . ခေါင်းစားတော့တာပဲ..
ရှေ့က ညီအကိုမောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... အားလုံးဟာ...သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာတွေပါပဲခင်ဗျာ...
အညွှန်း - နိဒါန်း Intro, ဘလော့blog, အိုင်တီ IT, လေ့လာသင်ယူခြင်း Learning
သီလသည် ကိုယ်နှုတ်အမူအရာတို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည့် စည်းကမ်းတစ်မျိုး
( ခ) ကာမဂုဏ်အမှားအယွင်းကျင့်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်း
( ဂ) အမှားပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်း
ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား ရန်များစေတတ်သော စကားမျိုးပြောခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်း
နှုတ်စောင့်စည်းရမည့် စည်းကမ်းကို လိုက်နာခြင်း
ချစ်ခင်ညီိညွှတ်မှုကို တိုးတက်စေမည့် စကားမျိုးကိုသာပြောဆိုခြင်း
စည်းကမ်းတကျ ပြောခြင်း၊ နားထောင်လိုက်ရသူများအဖို့ မှတ်သားရလောက်သည့် စကားမျိုးပြောခြင်း၊
ကျမ်းဂန်အကိုးအကားနှင့်အညီ ပြောခြင်း၊ အပိုင်းအခြား အကန့်အသတ်ဖြင့်ပြောခြင်း၊ မိမိ၏ပြောစကားကြောင့် နားထောင်သူအတွက် လွဲမှားစွာ အသိမှားအမှတ်မှားခြင်းများ မဖြစ်စေလိုသော စေတနာဖြင့် ပြောဆိုခြင်း. .
လောကအတွက် အမှားအယွင်းများမဖြစ်အောင် နှုတ်စောင့်စည်းပြီး စကားပြောခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်... လောကတွင်ဆိုက်သော ဘေးကြီးငါးပါး ..
မူးယစ်သဖြင့် မူးယစ်သူ၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှသူများ ဆင်းရဲရသောဘေး . .
ဘေးကြီးငါးပါးကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ . .
သီလကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့် လောကကြီးအတွက် ဘေးကြီးငါးပါးကင်းသွားမည် . .
ကိုယ်တိုင် အပါယ်လေးပါးကျမှာကြောက်သဖြင့် ဆောက်တည်သောသီလ . .
လောကတွင် ဆိုက်ရောက်နေသောဘေးကြီးများ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကိုယ်တိုင်ဆောက်တည်သော သီလ . . လောကကိုငဲ့ကွက်သောသီလက တန်ဘိုးမြင့်သည်… မေတ္တာပါဝင်သည်…
ငါအကျင့်ပျက်ခြင်းကြောင့် သူတပါးတို့ ဘေးဒုက္ခမရောက်အောင် ငါ့ကိုယ်ငါထိန်းမည်…
တရားတော်နာယူရန် အချိန် မရသေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ...
အညွှန်း - ကိုးကွယ်မှု Religion, ကိုယ်ကျင့်တရား Morality, နာကြားခဲ့သော တရားတော်များ, သီလ Thila
ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော်တို့သည် စင်စစ်အားဖြင့် အဆုံးအစမရှိ ကြီးကျယ်များပြားကုန်၏။
ဗုဒ္ဓ၀ိသယာ အစိန္တေယျာဟု ဆိုသည်မဟုတ်ပါလား။
အစိန္တေယျအရာကို ရတော်မူသော ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော် ကျေးဇူးတော်တို့သည်လည်း
အစိန္တေယျပင် ဖြစ်ရပေမည်။ အစိန္တေယျဖြစ်သည်ဆိုလျှင် အနန္တလည်း ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် အဋ္ဌကထာတို့၌ ဘုရားတစ်ဆူသည် အခြားစကားကို မဆိုဘဲ
ဘုရားတစ်ဆူ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကို မိန့်ကြားလျက်သာ နေပါသော်လည်း
ကမ္ဘာတစ်ခုသာလျှင် ကုန်ဆုံးသွားရာ၏။ ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကား မကုန်နိုင်ဟု ဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အဆုံးအစမရှိ ကြီးကျယ်များပြားသော ဘုရားရှင်၏
ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကို အောက်မေ့လျက် အထပ်ထပ်ပွားများခြင်း၊ ကြည်ညိုခြင်းသည်
ယင်းကို ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ဘာဝနာဟု ခေါ်ဆိုပေသည်။
(ဗုဒ္ဓ + အနုဿတိ) ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကို ခြုံငုံ၍သော်လည်းကောင်း၊
၀မ်းမြောက်ကြည်ညိုမှုကို ဖြစ်စေခြင်းသည် ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာပင် ဖြစ်သည်။
ဘုရားနှင့်စပ်သမျှ ၀မ်းမြောက်ကြည်ညိုမှု၊ တည်ကြည်ငြိမ်သက်မှု
စသည်တို့ကိုလည်း ဗုဒ္ဓါနုဿတိသို့ သွင်းယူနိုင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓါနုဿတိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နက်နဲသိမ်မွေ့သည့် သဘောတရားဖြစ်သော
ဘုရားဂုဏ်တော် ကျေးဇူးတော်တို့သည် ပုံသဏ္ဍာန်ပညတ် မထင်ကောင်းသော အရာဖြစ်သောကြောင့် အခြားကမ္မဋ္ဌာန်းမှာကဲ့သို့ နိမိတ်ပုံအာရုံ ထင်ခြင်းစသည်တို့ မရှိနိုင်။
စင်စစ် နက်နဲကြီးကျယ်သော ဘုရားဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြုလျက်
ဈာန်သို့မရောက်၊ ဥပစာရမျှနီးနီး အားကောင်းသော သမာဓိသို့ ရောက်နိုင်၏။
သို့ရာတွင် အနုတ္တရပုညခေတ္တ ဆိုသည့်အတိုင်း
အတုမရှိသော လယ်ယာမြေကောင်းသဖွယ်ဖြစ်သည့် မြတ်စွာဘုရား၌ အာရုံကိုချထားရသော ကုသိုလ်စေတနာသည်ကား အတိုင်းမသိ များမြတ်ပြန့်ပြောသော အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိစေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ပဒုမုတ္တရာဘုရားရှင်က နန္ဒရသေ့ကို မိန့်တော်မူရာတွင် နန္ဒ.. သင်သည် ဘာဝနာတကာတို့ထက် မြတ်သော ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာကို စီးဖြန်းပွားများလော့ ဟု ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ (သုဘူတိမထေရအကြောင်း-ရှု)
သူငယ်ချင်းတို့ရေ . . .
ဂုဏ်တော် (၉) ပါး ကိုပူဇော်နေကြဆိုရင် . . .
ဒီအတိုင်းလေးလည်း ပူဇော်ကြည့်စေချင်တယ် . . .
၁+၈ = တနင်္ဂနွေနေ့
၂+ရ = တနင်္လာနေ့ + စနေနေ့
၃+၆ = အင်္ဂါနေ့ + သောကြာနေ့
၄+၅ = ဗုဒ္ဓဟူးနံနက် + ကြာသပတေးနေ့
၉ = ဗုဒ္ဓဟူးညနေ ( ဘဂ၀ါ ဂုဏ်တော် ) . . .
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအတိုင်းလေးကို မြန်မာ အနက် နဲ့ ပူဇော်ပါတယ် . . .
ဘာအကျိုးမှ မမျှော်မှန်းဘဲ . . . စမ်းကြည့်ကြစေချင်ပါတယ် . . .
ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ အကြောင်းဖော်ပြချက်မှာ မြန်မာသူငယ်ချင်းများ မှ
ကိုကယ်လ်မွန် ၏ ဖော်ပြချက်များကို ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည် . .
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ဘုရားဂုဏ်တော် (၉) ပါး..
တရားတော်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာနားထောင်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ နားထောင်လို့ရပါတယ်..
ကွန်ပျုတာထဲကို တစ်ခါတည်း ကူးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Download ကို Click လုပ်ရမှာပါခင်ဗျာ . အားလုံးလိုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာ ကနေသွားလို့ရပါတယ် . .
အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာအကျိုးကို တတ်အားသမျှထမ်းဆောင်ကြသူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
အညွှန်း - ဂုဏ်တော် Virtues, နာကြားခဲ့သော တရားတော်များ, ဘာဝနာ Barwana, မြတ်စွာဘုရား Buddha
သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဦးဥာဏိဿရဟောကြားထားသော ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတရားတော်ပါ အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါသည်-
ယုံကြည်ခြင်း၊ ကိုးကွယ်ခြင်း နှင့် ဆုတောင်းခြင်း
မွန်မြတ်သော ကိုးကွယ်ခြင်း နှင့် မမွန်မြတ်သော ကိုးကွယ်ခြင်း
သီလ - ကိုယ်နှင့်နှုတ်ကို ထိန်းသော စည်းကမ်း
သမာဓိ - စိတ်ထိန်းသော စည်းကမ်း
ပညာ – စိတ်ထဲမှာစွဲနေသောအညစ်အကြေးများကို နှိုက်ထုတ်ပစ်သောနည်းလမ်း
ပါရမီ သို့မဟုတ် “လူမြတ်တို့အကျင့် ”
သစ္စာတရားကိုမြင်နိုင်သော အကျိုးရခြင်း၏ အကြောင်း
သရဏ ဆိုသည်မှာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျောက်ခြင်း
ကြောက်လန့်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ မကောင်းသောဘ၀၊
မကောင်းသောအဖြစ်၊ ကိုယ်နှုတ်စိတ်ညစ်ညူးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးသောအရာများ
ဘယ်အရာအပေါ် ယုံကြည်မလဲ ဘာကိုအာရုံပြုကြမလဲ
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဆောင်ရွက်ချက် . .
သစ္စာတရားကိုသိမှကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်သန့်ရှင်းမည်
အကျိုးယုတ်မည့်ကိစ္စကိုတားပေးပြီး၊ အကျိုးရှိမည့်ကိစ္စကို ပြတ်ပြတ်သားသားညွှန်ကြားပေးသူ
သူငယ်ချင်းများအားလုံး နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းရွှင်လန်းပြီး အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာအကျိုးကို တတ်အားသမျှ ထမ်းဆောင်ကြသူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
အညွှန်း - ကိုးကွယ်မှု Religion, နာကြားခဲ့သော တရားတော်များ, မြတ်စွာဘုရား Buddha, အမှန်တရားTruth
သူငယ်ချင်းတွေကို ဘာတွေပေးရမလဲ သေသေချာချာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ
နာကြားခဲ့ဖူးသော ၊ နာကြားနေဆဲဖြစ်သော တရားတော်တွေကို
ပြန်ပြီးဖောက်သည်ချဖို့ အရင်တွေးမိပါတယ် . .
တနေ့ထက်တနေ့ ပူလောင်မှုတွေများသထက်များလာတဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ
အားလုံးဟာ တရားတော်တွေကို နာကြားဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ကြတော့သလို . . ဖြစ်လာတာတွေ့ရတာကြောင့်
တရားတော်တွေ အထဲမှာ ဟောကြားထားတဲ့ မှတ်သားဖွယ်ရာ သိမှတ်စရာလေးတွေ၊
သိချင်ပြီးတရားတော်ကို နာယူချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . .
ကူးယူနာကြားနိုင်မယ့် “ လင့်ခ် ”လေးတွေနဲ့
ကျွန်တော်ရယူခဲ့တဲ့ နေရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် . .
တကယ်လို့များ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေထဲမှာ . . မှားယွင်းမှု တစ်စုံတရာပါနေခဲ့တာ တွေ့ရင်လည်း ပြောပြပေးခဲ့ဖို့ ပန်ကြားအပ်ပါတယ် . .
ချစ်သူငယ်ချင်းများအားလုံး တရားဓမ္မမှာ မွေ့လျော်၊ ပျော်ပိုက်နိုင်ကြပါစေဗျာ. . .
အညွှန်း - တရား Dhamma, တရားတော် TayarDaw, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မြတ်စွာဘုရား Buddha
ကိလေသာမှန်သမျှ ကင်းစင်တော်မူသော၊ ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်တွင်ပင် မကောင်းမှုမှန်သမျှ ပြုတော်မမူသော၊ လူမင်းနတ်မင်းဗြဟ္မာမင်းတို့နှင့်တကွ လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား။
သိစရာ တရားအလုံးစုံကို ဆရာမရှိ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင် တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
အသိဥာဏ်ရော အကျင့်ပါ ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူသော ၊ ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွလှမ်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
သတ္တလောက၊ သြကာသလောက၊ သင်္ခါရလောက ဟူသော လောကသုံးပါးကို သိမြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
၆။ အနုတ္တရော ပုရိသဒမ္မသာရထိ
ဆိုဆုံးမထိုက်သောသတ္တ၀ါတို့ကို အတုမရှိဆုံးမတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
လူနတ်ဗြဟ္မာ၊ သတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့၏ ကိုးကွယ်အားထားရာ ဆရာ ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
သစ္စာလေးပါးကို ကိုယ်တိုင်လည်းသိ၊ သူတစ်ပါးတို့လည်းသိအောင် ဟောကြားတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
ဒီအချက်တွေက မူရင်းအဓိပ္ပါယ်တွေပေါ့ . . .
ဒီအဓိပ္ပါယ်တွေကို အခုလို ပေါင်းစပ်ကြည့်တဲ့အခါ ပိုပြီး လေးနက်၊ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ၊ လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖွယ်ရာ ဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါမယ်။
ကိလေသာ မှန်သမျှ ကင်းစင်သော ၊ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်တွင်ပင် မကောင်းမှုမှန်သမျှ ပြုတော်မမူသော ၊သစ္စာလေးပါးကို ကိုယ်တိုင်လည်းသိ၊ သူတစ်ပါးတို့လည်းသိအောင် ဟောကြားတော်မူသောကြောင့် လူမင်း၊ နတ်မင်း၊ ဗြဟ္မာမင်းတို့နှင့်တကွ လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား။
သိစရာတရားအလုံးစုံကို ဆရာမရှိကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူသောကြောင့် လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့၏ ကိုးကွယ်အားထားရာ ဆရာ ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
အသိဥာဏ်ရော အကျင့်ပါ ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့် ဆိုဆုံးမထိုက်သော သတ္တ၀ါတို့ကို အတုမရှိ ဆုံးမနိုင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
လောကသုံးပါးကို သိမြင်တော်မူသောကြောင့် ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူသော၊ ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ ကြွလှမ်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
ဒီဂုဏ်တော်တွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်အနက်တွေကို စိတ်ထဲကဖြစ်စေ၊ နှုတ်နဲ့ဖြစ်စေ ရွတ်ဖတ်ရင်း
ဘုရားရှင်အပေါ် ကြည်ညိုစိတ်တွေ ပိုပြီးလေးလေးနက်နက် ဖြစ်ပေါ် လာလိမ့်မယ်။
ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်မှာ မကောင်းမှု မပြုမိအောင်နေတာ
အခြားသူတွေရဲ့ အားထားလေးစားစရာ ဖြစ်လာတာ
အသိဥာဏ်ရော အကျင့်ပါ ပြည့်စုံကောင်းမွန်အောင် နေထိုင်ကျင့်သုံးချင်စိတ် အမြဲဖြစ်ပေါ်နေတာ
မကောင်းသောစကားကို ကြားရသောဆင်းရဲမှုက လွတ်လာတာ
စတဲ့ မြောက်မြားလှစွာသော ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း
မတောင်းဘဲ အလိုလိုရလာ၊ ရောက်လာတာ တွေ့ရမယ်။
ပွားနေရင်းရုတ်တရက်သေရင်တောင် ငရဲ မရောက်နိုင်ဘူး။
သံသရာမှာ မကောင်းတဲ့ ဘုံ ဘ၀တွေ မရောက်နိုင်ဘဲ ၊
အဆုံးမှာ နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်တာ စတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရလာမယ် ။
(တကယ်တော့ဒီထက်မကများပြားလှတဲ့ အကျိုးတွေရရှိမှာပါ. . နောက်ထပ်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော် တွေဟာကျွန်တော်တို့ မှန်းဆမရနိုင်အောင်များပြားလှသလို ကျေးဇူးလည်းကြီးမားလွန်းလှတဲ့အတွက် မိမိတို့သံသရာအကျိုးကိုမျှော်ပြီးအထူးအာရုံပြုကြစေချင်ပါတယ် . .)
တကယ်လို့များ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေထဲမှာ . . မှားယွင်းမှုတစ်စုံတရာပါနေခဲ့တာတွေ့ရင်လည်း ပြောပြပေးခဲ့ဖို့ ပန်ကြားအပ်ပါတယ် . .
သူငယ်ချင်းများအားလုံး နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းရွှင်လန်းပြီး
အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာအကျိုးကို တတ်အားသမျှ ထမ်းဆောင်ကြသူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
အညွှန်း - ဂုဏ်တော် Virtues, တရား Dhamma, တရားတော် TayarDaw, မြတ်စွာဘုရား Buddha
Self-study လုပ်ရတာ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို
web site ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခု ဝေမျှပေးချင်ပါတယ် . . .
အစားကောင်းစားရရင် ချစ်တဲ့သူတွေကို သတိရတယ်
ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးအတိုင်းပါပဲ . . အခုလို site ကောင်းလေးတွေ့လာရတော့
သူငယ်ချင်းတွေကို မေ့ထားလို့ကို မရပါဘူး . . အထူးသဖြင့်တော့
Training centre တွေကို အားထားနေကြရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ၊
လေ့လာချင်တဲ့စိတ်ရှိနေပေမယ့် ဘယ်နေရာကစပြီးလေ့လာရမယ်ဆိုတာကို မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုပြီးတော့ Share လုပ်ချင်ပါတယ် . .
တကယ်တော self-study လုပ်ရတာဟာ စ ဖို့ပဲခက်တာပါ . .
တဖြေးဖြေး အရှိန်ရသွားပြီဆိုရင် ပျော်စရာကောင်းလာတာတွေ့ရမှာ အမှန်ပါပဲ . .
English-Myanmar Dictionary စီဒီ တစ်ချပ်နဲ့
Computer dictionary (CD / ebook ) တစ်ခုတော့ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားရပါမယ် . .
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့် ဆရာ (ပါမောက္ခချုပ်) ပြောဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို လက်ဆင့်ကမ်းချင်ပါသေးတယ် . .
အဲဒီဘာသာရပ်ကိုရော English စာကိုပါ ကျွမ်းကျင် လာမယ် . . . တဲ့ . .
ဒီ Site လေးမှာလေ့လာလို့ရတဲ့ Software တွေကို
ပါဝင်တဲ့ Tutorial အရေအတွက်အလိုက် အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် . ..
* Fireworks (129) * Flash (1657) * Gimp (14) * Illustrator (98) * Paint Shop Pro (40)
* Photoshop (6254)
* 3DS MAX (560) * AutoCAD (24) * Blender 3d (19) * Bryce 3d (16) * Cinema 4D (113)
* Lightwave 3D (19) * Maya (145)
* Adobe Flex (2) * ASP (466) * ASP.NET (220) * ColdFusion (36) * CSS (167) * Dreamweaver (05)
* Excel (116) * MS PowerPoint (52) * MS Word (61) * QuarkXPress (8)
* Accounting (3)
* eCommerce (8)
* Legal (3)
* Marketing (28)
* DB Design (1) * DB2 (0) * MS Access (15) * MsSQL (12 )
* MySQL (70) * Oracle (46) * SQL Basics (29) * Sybase (4)
* C and Cpp (145) * Delphi (7)
* Visual Basic (157) * Visual C ( 8 )ေ
* Linux (98)
* Windows (1)
* Final Cut Studio (7)
* Premiere (73)
* P2P Filesharing (7)
* Web Hosting (56
Web site လိပ်စာက http://www.tutorialized.com ပါ
English-Myanmar Dictionary ကို မြန်မာစာအဖွဲ့က ထုတ်ဝေထားတာရှိပါတယ်
၀ယ်ဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်တဲ့ အဝေးရောက်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် . .ဒီမှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ် . . .
( ၀ယ်လို့ရရင်တော့ ၀ယ်သုံးကြပါ ဈေးမကြီးပါဘူး )
Computer-dictionary (ebook) ကိုတော့ ဒီမှာယူပါ . .
(Microsoft Computer-dictionary - version4ပါဒီထက့် update ဖြစ်တာ ရှိရင်လည်း ပေးကြပါဦး )
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ပညာဗဟုသုတ တိုးတက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ . .
အညွှန်း - နည်းပညာ Technology, အိုင်တီ IT, လေ့လာသင်ယူခြင်း Learning
တကယ်တော့ ဒီ Blog လေးဟာ မြန်မာသူငယ်ချင်းများ Website ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ Posts တွေထဲကနေပြန်ယူပြီး စတင် အကောင်အထည်ဖော်ထားတာပါ . . .
ကျွန်တော် တကယ်လုပ်ချင်တာက IT Training School ပါ၊ ကိုယ်ပိုင်မလုပ်နိုင်သေးတော့ ပညာဒါနကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကူညီပေးနေပါတယ်. . ဒီနေရာလေးဟာလည်း အားလုံးအတွက် လိုအပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတဲ့ Internet ပေါ်မှာရော ၊
အပြင်မှာပါရနိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ် ( Resources ) တွေကို ဝေမျှပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် . . .
လူလာဖြစ်ရတဲ့ အချိန်တိုလေး အတွင်းမှာ မြန်မာ ညီအကို မောင်နှမတွေအားလုံးကို ခင်မင်ရင်းနှီးချင်ပါတယ်ဗျာ . .
အညွှန်း - နိဒါန်း Intro, မြန်မာ Myanmar, လေ့လာသင်ယူခြင်း Learning